Qiimaynta Ciyaartoyda Kooxaha Juventus, Man City, Atltico Madrid & Schalke Ee Kulamadii Champions League Iyo Xidigihii Kulamadan Isku Muujiyay. - GOOL24.NET
Qiimaynta Ciyaartoyda Kooxaha Juventus, Man City, Atltico Madrid & Schalke Ee Kulamadii Champions League Iyo Xidigihii Kulamadan Isku Muujiyay.
Kooxaha Manchester City iyo Atletico Madrid ayaa guulo muhiim ah gaadhay kulamadii lugtii hore ee Champions League kadib markii ay dhinaca iskaga dhigeen Schalke iyo Juventus isda ay u kala horeeyaan. Cristaino Ronaldo ayaa murugo kala soo laabtay caasimada Madrid iyo kooxdii uu xifiltanka wayni kala soo dhexeeyay ee Atletico Madrid.
Manchester City waxay soo gaadhay guul ayna mararka qaar ka fikiri karayn kadib markii kaadhka cas loo taagay Otamendi isla markaana ilaa daqiiqadii 84 aad hogaanka looga hayay 2-1 laakiin Leroy Sane ayaa gool cajiib ah Man City ciyaarta ugu soo celiyay halka Sterling uu noqday xidiga guusha farta ka saaray Guardiola.
Dhinaca Atletico Madrid waxay guuldaro waji gabax ah soo baday Juventus oo lagu tirinayay kooxaha ugu cad cad ee Champions league xili ciyaareedkan ku guulaysan kara waxayna kooxda Simeone heshay guul iyo waliba shabaq nadiif ah si ay Maxi Allegri iyo kooxdiisa Juventus culays ugu saaraan kulanka Turin ka dhici doona.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa qiimayntii ciyaartoyda kooxaha Manchester City-Schalke iyo kulankii adkaa ee Atletico Madrid iyo Juventus.
Qiimaynta Ciyaartoyda Schalke 04-Manchester City:
Manchester City iyo Schalke ayaa iska dhaliyay shan gool kulan cajiib ahaa oo ay labada kooxoodba hogaaminta ciyaarta uu midba waqti hayay. Man City ayaa gool ku hormartay laakiin laba gool oo rekoodhe ahaa ayay Schalke ciyaarta dhiga kale ugu dhigtay.
Laakiin iyada oo Manchester City xaaladu ku xun tahay isla markaana kaadhka cas laga siiyay Otamendi ayuu Sane gool laaga xorta ah ku dhaliyay daqiiqadii 85 aad si uu ciyaara uga dhigo barbaro 2-2 ah laakiin dhamaadkii ciyaarta Sterling ayaa goolka saddexaad ee guusha u dhaliyay Man City.
Xidigii Garoonka: Salif Sane oo ka tirsan kooxda Schalke 04 ayaa noqday xidigii garoonka ugu fiicnaa laakiin sidoo kale Leroy Sane oo Manchester City ka tirsan ayaan ka dhicin oo isna u qalmay in uu noqdo xidigii garoonka ugu fiicnaa.
Salif Sane iyo Leroy Sane ayaa bandhigyo waa wayn ka sameeyay kulankii Champions league laakiin waxaa sidoo kale qiimayn sare helay Bentaleb oo labada gool ee Schalke kulankan ka dhaliyay balse waxaa kulankan ku fashilmay Otamendi, Fahrmann iyo Mendyl.
Halkan ka akhriso qiimaynta Man City iyo Schalke
Badalkii: Burgstaller (6), Skrzybski (5), Harit (n/a)
Badalkii: Kompany (7), Sane (8), Zinchenko (n/a)
Riix 2 si aad qiimayna Juventus iyo Atletico Madrid uga bogato.